Indlu ye-Zucchini. - I-Airbnb
Noto, Sicilia, i-Italy
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Janne & Massimo
U-Janne & Massimo Ungumbungazi ovelele
Ikotishi endlini yasepulazini kanye nepulazi lezinto eziphilayo. Isidleke esithokomele nesinethezekile esitholakala epharadesi lemvelo elincane eduze nomfudlana.
Itholakala emaphandleni kodwa iseduze kakhulu nedolobha laseNoto nolwandle.Ihlala abantu ababili. Ikhishi langaphandle elizimele. I-Wifi iyatholakala engadini noma ekamelweni elincane elivamile lekhompyutha.
Indlu iyingxenye yepulazi elincane le-organic eliqhutshwa umndeni kanye nepulazi. Ugxile emaphandleni naseSicily. Inekamelo lokulala elihle eliphindwe kabili elinekhoneni eliphilayo, igumbi lokugezela elineshawa kanye negceke elihle langasese lapho senze khona ikhishi elinethezekile nelihle.
4.74 out of 5 stars from 74 reviews
4.74 · 74 okushiwo abanye
Indlu itholakala emzini owawusepulazini encane, Valle del Tortorone, emaphandleni kodwa kakhulu eduze edolobheni Noto (imizuzu 5 ngemoto). Lizungezwe kugcwele izihlahla zikalamula yonke, nemithi yezithelo izihlahla nokuguqulwa ubude. Ukusakaza ezivamile ageleze lapho izingane ziyakuthanda ukudlala.Izivakashi zethu zasedolobheni zithi ipharadesi.
Ibungazwe ngu-Janne & Massimo
Sihlala esizeni futhi siyakujabulela ukuxhumana nezivakashi zethu futhi sizisize zizulazule endaweni yethu. Kodwa uma izivakashi zithanda, zingajabulela neholide lazo ngasese.
UJanne & Massimo Ungumbungazi ovelele
Izilimi: Dansk, English, Italiano
Hlola ezinye izinketho ezise- Noto namaphethelo